I-Adobe Creative Cloud - Umculo wamahhala kunye nokulandwa kwemidiya yevidiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
ikhayaAdobe Creative Cloud
Udidi: I-Adobe Creative Cloud
I-Adobe Creative Cloud iyisethi yezicelo kunye neenkonzo ezivela kwi-Adobe Systems ezinika ababhalisile ukufikelela kwiqoqo yesofthiwe esetyenziselwa ukuyila imifanekiso, ukulungiswa kwevidiyo, ukuphuculwa kwewebhu, ukufota, kunye neesethi yezicelo zeselula kunye nezinye iinkonzo zefu. Kwi-Cloud Cloud, inkonzo yenyanga yokubhalisa okanye yonyaka ihanjiswa kwi-intanethi. Isofthiwe esuka kwi-Creative Cloud ilandwa kwi-intanethi, ifakwe ngqo kwikhomputha yendawo kwaye isetyenziswe nje kuphela xa ubhaliso luhlala luvumelekile. Uhlaziyo lwe-intanethi kunye neelwimi ezininzi zifakwe kwi-CC yobhaliso. I-Cloud Cloud yabanjwe ekuqaleni kwi-Amazon Web Services, kodwa isivumelwano esitsha kunye neMicrosoft sinesofthiwe, ngokuqala nge-2017 version, ebanjwe kwi-Microsoft Azure.